Staff Writer The University of Cape Town has denied accusations by the SRC of exploiting its newly insourced staff and doing less to curb the impending financial exclusion of 23 students. Last […]
By Vernac News on Sep 3, 2017 • ( Leave a comment )
Staff Writer Scroll down for English Ekapa – Iimpukane eziluhlaza zihlebele iVernac News ukuba ikhutshiwe ifenitshala kumagumbi wokusebenzela athile kwiDyunivesithi yaseKapa kulungiselelwa uqhankqalazo olulindeleke ukuqala ngoMvulo. Ikhutshiwe ifenitshala kwii-ofisi ze-Centre for Higher […]
By Vernac News on Sep 1, 2017 • ( Leave a comment )
Kamva Ndesi Ndome nko! Kwaye ndinxaniwe nje, ndinga ndingafunda uncuthu loncwadi olubhalwe ngolwimi lwenkobe olusulungekileyo. Ndithetha ngoncwadi olubhalwe ngumntwan’omgquba, kuba kaloku uzayinonga ngezangotshe zakwaxhosa! Ngathi ndiyambona umzali ebobotheka seyebezelisa imibele esith “nyana-wam […]